Onyeisiala Buhari amachiela mba ofesi ịnapụ ndị Naịjirịa ọrụ - BBC News Ìgbò
Onyeisiala Buhari amachiela mba ofesi ịnapụ ndị Naịjirịa ọrụ
6 Febrụwarị 2018
Nkenke aha onyonyo Onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari anọọla n'oche ọchịchị Naịjirịa afọ atọ
Onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari amanyela iwu ga-egbochi ndị mba ofesi inwete ọrụ ọbụla na Naịjirịa ma ya bụrụ na o nwere onye Naịjirịa maọbu ụlọọrụ Naịjirịa so achọ ya bụ ọru na Naịjiria, ọkachasi maọbụrụ na ndị Naijirịa nwere ikike iji arụ ọrụ ahụ.
Iwu a Buhari binyere aka so na ihe a na-akpọ Executive Order 5 n'asụsụ bekee. Ọ ga-enye aka hụ na ndị Naịjirịa nọ na mpaghara technụzụ ga-aracha elele kwesịrị iruru ha.
Onye na-ekwuchitere Buhari bụ Garba Shehu sị na iwu a ga-eme ka Naịjirịa kwusie ike n'ihe gbasara ọganiru obodo.
Iwu executive order a gbochikwara ndị mịnịstrị ndị nlekọta ụlọ inye ndị ọrụ si mba ofesi visa, maọbụrụ na ndị Naịjirịa ga-arụnwu ya.
Kama ọ hapụrụ ohere ka otu ndị si mba ofesi nwee ike irụ ọrụ ma ọ bụrụ na onweghi ndị Naịjirịa nwere ikike iji arụ ya, mana ha ga-enwe atụmatụ tinyere ọganiiru ndị Naịjirịa n'uche, tupu enye ha ọrụ a.
Buhari gwakwara ndị ministrị na ndị ngalaba na-ahụ maka sayensị na teknụzụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere ndị ọkachamara si Naịjirịa n'ime ọrụ ndị dị ka itụatụmatụ na ịwepụta ebumnuche projetị ndị ncheobodo.
Nrụrịtaụka BBC Igbo n'Imo steeti
BBC Igbo ga-amalite nrụrụtaụka ọkwa gọvanọ taa
Day 29: Ihe niile ị kwesiri ịmata maka Atiku Abubakar #BBCNigeria2019